Ihe ngosi obi uto m | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 24, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Hugh MacLeod na GapingVoid.com nwere nnukwu post taa na-arịọ ndị folks maka 'manifestos' ha. Oge inye ekele kpaliri m ide nke obi uto. Nke a bụ ihe m dere na ihe Hugh dere (ya na ndozi ederede na ihe atụ Hugh!):
Omenala anyi juputara na ozi ndi n’eduba anyi n’igbu onwe anyi. Ejikọtara Obi wetọ na ihe anyị enweghị… ụgbọ ala, ego, 6-pack abs, awards, lifestyles, or even just a soda. E nwere ihe ọmụma dị ka akụ na ụba, n'agbanyeghị na ọ dị ọtụtụ ma ọ bụ nke e ketara eketa. Nke a bụ ọrịa ọdịbendị anyị, na-emesi anyị obi ike na anyị enweghị amamihe zuru oke, na anyị enweghị akụ na ụba, enweghị afọ ojuju.
Lọ ọrụ mgbasa ozi na-eme ka anyị nwee akụkọ banyere akụnụba, mmekọahụ, mpụ na ike - ihe niile nwere ike iwute anyị ma ọ bụ ndị ọzọ ma anyị meebiga ihe ókè. Ọbụna gọọmentị anyị na-esonye na ndagharị ahụ, na-eme ka anyị jiri lọtrị. Ozi ahia ọ bụla na azụmahịa ọ bụla bụ otu, “You ga-enwe obi ụtọ mgbe”.
Obi adịghị anyị mma n’ebe di na nwunye anyị nọ, n’ihi ya, anyị gbara alụkwaghịm. Obi adịghị anyị mma n’ebe obibi anyị, n’ihi ya anyị na-akwaga ezinụlọ anyị ma zụta nke buru ibu karị ruo mgbe anyị na-agaghị enwe ego ha. Anyị na-azụ ahịa rue mgbe akwụmụgwọ anyị gwụchara ma anyị agaghị enwe ego. Ọrụ anyị enweghị obi ụtọ, yabụ anyị na-esonye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emerụ ahụ iji gbalịa ịkwalite mgbasa anyị. Anyị enweghị obi ụtọ na ndị ọrụ anyị ka anyị were ndị ọhụụ. Anyị enweghị obi ụtọ na uru anyị bara, yabụ anyị hapụrụ ndị ọrụ kwesịrị ntụkwasị obi ka ha laa.
Anyị bụ ọdịbendị nke ndị a gwara na hording bụ ụzọ kachasị mma iji nwee obi ụtọ. Ahịhịa ahụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọzọ - enyi nwanyị ọzọ, ụlọ na-esote, obodo na-esote, ọrụ na-esote, ihe ọ drinkụ drinkụ na-esote, ntuli aka na-esote, nke na-esote, na-esote, na-esote… A naghị akụziri anyị ka anyị nwee obi ụtọ n'ihe anyị nwere ugbu a. Anyị ga-enwerịrị ya, ma nweta ya ugbu a. Ọ bụ mgbe ahụ ka anyị ga-enwe obi ụtọ.
Ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe omume mmadụ ole na ole ahọpụtara inwe ihe niile, ụlọ mmanya ahụ na-adị elu mgbe niile karịa ka anyị nwere ike iru. Anyị enweghị ike inweta obi ụtọ dịka omenala anyị si kọwaa. Olee otú anyị ga-esi nagide ya? Anyị ọgwụ. Ọgwụ ọjọọ, mmanya na-aba n'anya, ọgwụ ndenye ọgwụ, ụtaba niile dị mkpa ma bụrụ ndị ama ama ebe ọ bụ na ha anaghị ebi ndụ anyị afọ.
Na eziokwu, anyị nọ n'elu ụwa. Anyị bụ ndị isi nwere ihe ọ bụla na-egosi na ihe ịga nke ọma na omenala na-atụle. Anyị nwere ndị agha kachasị ike, akụ na ụba dị egwu, akụnụba kacha ukwuu, na ndị ịtụnanya.
Ma, anyị anaghị enwe obi ụtọ.
Adaberela na onye obula ma obu ihe obula ozo nke gi iji mee ka gi nwe obi uto. Ọ dịịrị onye ọzọ ma e wezụga gị. Mgbe inwere obi uto gi na onweghi onye nwere ike izuru ya, onweghi onye puru ịzụta ya, na igaghi acho ebe ozo ichota ya. Ma ị nwere ike inye ụfọdụ oge ọ bụla ịchọrọ!
Chukwu gozie gi na nke gi nke a inye ekele! Inye ekele bụ ụbọchị 1 n’afọ. Ikekwe anyị kwesịrị ịnwe “Onwe Onwe” ma weghachite kalenda anyị. Ka anyị jiri oge fọdụrụ n’afọ na-enwe obi ụtọ n’ihe anyị nwere na otu ụbọchị na-ebibi ihe anyị na-enweghị. Ka anyị na ezinụlọ anyị, ụmụ anyị, ụlọ anyị, ọrụ anyị, obodo anyị na ndụ anyị nwee a beụrị.
Ga a beụrị… mgbe unu chọtara anụrị n'ime onwe unu.
Dec 22, 2006 na 10:32 PM
“Melek otutuuk kan̄ cha ìkpoyaka isi ikweek irek me inyọn̄ ogoon̄ ya, mije, there owu okaan̄-ejit kiban̄. Obi uto adighi adalata site na ikerita.â ???